स्प्यानिश क्रिया सम्मेलन – Vocre
स्प्यानिश क्रिया सम्मेलन
स्पेनिस क्रिया सम्बन्धी सिक्न सजिलो छैन. But it'salittle bit easier when you've got some help (andacheat sheet!).
स्पेनिस क्रिया सम्बन्धी सिक्न सजिलो छैन.
हामीलाई केहि शब्द र वाक्यांशहरू सम्झन सजिलो छ भन्ने लाग्छ (जस्तै नमस्कार अन्य भाषाहरूमा) and Spanish verbs than it is to learn the rules of conjugation. त्यसकारण हामीले यो चिया शिट बनायौं र हाम्रो नि: शुल्क र सशुल्क भाषा सिक्ने अनुप्रयोगहरू.
Learning Spanish Verbs: किन स्पेनिश Verb Conjugation सिक्नुहोस्?
जब यो आउँछ स्पेनिश भाषा अनुवाद, it’s easier to learn the स्प्यानिश क्रिया सम्बन्धी नियम भन्दा यो प्रत्येक क्रिया को conjugated रूपहरु कण्ठ गर्न हो (हामी यहाँ हजारौं क्रियापदहरू बोल्दै छौं) when learning Spanish verbs. Understanding the rules ofalanguage can help you decipher the translation easier.
तपाईंले वर्ज कन्ज्युएट गर्न सिक्नु भन्दा पहिले, तपाईंले सर्वनामहरू र केहि infinitive फार्महरू नियमित र अनियमित क्रियापदहरू सिक्नुपर्नेछ. क्रियापदहरूको infinitive रूपहरू तपाईको कन्ज्युगेट गर्नु भन्दा पहिले ती शब्दहरू मूल रूपमा हुन्.
Infinitives का उदाहरणहरू समावेश गर्दछ:
अङ्ग्रेजीमा, हामीले क्रियाको अघि शब्द 'to' राख्दछौं जब हामी शब्दको इन्फिनिटिभ फारम प्रयोग गर्दैछौं.
सर्वनाम मानिसका लागि आवश्यक शब्दहरू हुन्. तिनीहरू एक व्यक्तिको नामको स्थान लिन्छन्. बरु भन्दै, “एलिस पसलमा गइन्,"तपाईं भन्न सक्नुहुन्छ, "उनी पसलमा गइन्।" वा पनि, “ऊ पसलमा गयो,"जब हामी एक जना मानिसको बारेमा कुरा गर्दैछौं.
Tú, usted, ustedes = तपाईं, तपाईं (औपचारिक), तिमीहरु सबै
Él, ella, usted = ऊ, उनी, तपाईं
Nosotros, nosotras = हामी (पुरुष र महिला)
यी सर्वनामहरू अ in्ग्रेजीमा सर्वनामहरूसँग समान रूपमा प्रयोग हुन्छन्. म पसल जान्छु. तपाईं भाँडा माझ्नु हुन्छ. She plays the piano.
नियमित क्रियापद स्पेनिश मा कन्जुगेट गर्न सजिलो हो. Learning Spanish verbs and these conjugations are very straightforward and formulaic.
तपाईलाई कसरी थाहा हुन्छ जुन कुन क्रियापदहरू नियमित छन्? तपाईंले अनिवार्य रूपमा तिनीहरूलाई सम्झन आवश्यक छ. र त्यहाँ धेरै छन्. त्यहाँ नियमित रूपमा सयौं नियमित स्पेनिश क्रियापदहरू छन्.
सब भन्दा सामान्य नियमित क्रियापदहरू समावेश गर्दछ:
कल गर्न: llamar
पिउनु (वा लिनुहोस्): tomar
पारित गर्न (समय बित्दै जाँदा): pasar
काम गर्न: trabajar
समाप्त गर्न: terminar
आवश्यक छ: necesitar
तपाईं अनियमित स्प्यानिश क्रिया सम्बन्धी कण्ठ सम्झनको लागि वास्तवमै राम्रो हुनुहुन्छ किनभने त्यहाँ नियमित क्रियापदहरू भन्दा केही अनियमित छ.
Irregular verbs are easier to remember because there are fewer irregular than learning Spanish verbs that are regular. केही अनियमित क्रियाहरू समावेश गर्दछ:
महसुस गर्न: estar
हुनुको लागि: tener
सक्षम हुन: poder
तपाईं देख्न सक्नुहुन्छ, यि धेरै अनियमित क्रियाहरू केहि धेरै प्रयोग हुने सामान्य क्रियापदहरू हुन्. के हुन सामान्य छ "हुन" र "महसुस गर्न" भन्दा?’हामी सबै को कुरा गर्छौं हामी को हौं र हामी सँधै कस्तो महसुस गर्छौं.
वर्तमान कालको संयोजन
वर्तमान कालमा स्पेनी क्रियापदहरू संयोजन गर्नु सजिलो छ. That’s because we use the present most.
"उनी आफ्नो बाइक चलाउँछे।"
"उसले एउटा कुकी लिन्छ।"
अवश्य, हामी भूत र भविष्यका अवधिहरू पनि प्रायः प्रयोग गर्दछौं. तर पहिले वर्तमान काल सिक्दा तपाईंलाई भविष्य र विगतको अवधिहरू सजिलोसँग मिल्दछ.
सुरु गरौं एक सजिलो नियमित क्रियापदको साथ:
कुरा गर्न: कुरा.
तपाईं r प्रतिस्थापन गर्नुहोस् (वा केही केसहरूमा एआर) ओ संग, s र मस.
ईर मा समाप्त हुने एक क्रियाको प्रयास गरौं: बाँच्नु (वा, बाँच्नु).
तपाईले यो केसमा देख्न सक्नुहुनेछ कि तपाईले इर बदल्नुहोस् (वा एक केसमा, r) ओ संग, e, es or mos.
विगत काललाई संयोजन गर्दै
Now that you’reapro at conjugating the present tense, let’s move on to the past and learn Spanish verbs in the past tense. (वा, विगतमा फर्केर जानुहोस् जस्तो यो थियो).
हाम्रो सजिलो नियमित क्रियाबाट सुरू गरौं:
कुरा गर्न: hablar.
तपाईं एआर प्रतिस्थापन (वा केवल एक केसमा r) é को साथ, तपाईं हुनुहुन्छ, ó र मस.
आइरमा समाप्त हुने हाम्रो क्रियाको प्रयास गरौं: vivir (वा, बाँच्नु).
तपाईले यो अवस्थामा देख्न सक्नुहुनेछ कि तपाईले आर को स्टेजको साथ बदल्नुहोस्, ó वा मस (र यो viv-of को मामलामा, तपाइँ पूर्ण रूपमा r हटाउनुहोस्).
यो जान्नु महत्त्वपूर्ण छ कि यो सब भन्दा आधारभूत भूत कालको स्पेनी क्रिया कान्जुगेशन हो. स्पनिश मा, तपाईंसँग पूर्वकालिक र असिद्ध भूतकाल पनि छ.
भविष्य कालको संयोजन
अब हामी कसरी जान्छौं कि कसरी वर्तमान र विगत काललाई मिलाउन सकिन्छ, let’s travel to the future.
R लाई बदल्नुको सट्टा, तपाईं क्रियाको infinitive फारम राख्नुहोस् र é, पखेटा, ए र ईमोहरू.
स्प्यानिश Verb Conjugation का लागि सुझावहरू
Learning Spanish verbs and their conjugation isn’t always easy. यसैले हामी सुझाव दिन्छौं कि चीजहरू ढिलो गरेर तपाईंको आफ्नै गतीमा जानुहोस्. हामी पनि सिफारिस गर्दछौं भाषा अनुवाद अनुप्रयोग डाउनलोड गर्दै तपाईंलाई उच्चारण सुन्न मद्दत गर्न र क्रियापद पहिलो वा नियमित अनियमित छ कि छैन निर्धारण गर्न.
मध्ये एक उत्तम भाषा अनुवाद अनुप्रयोगहरू is Vocre.
Voce offers language translation assistance with common words and phrases such as English-to-Farsi translation, Malay-to-English translation, Telugu translation, translating English to Khmer, English-to-Punjabi translation, र अधिक.